Shirka Bulshada Gerontological Minnesota - Cunnooyinka Lugaha
Shirweynihii Jaaliyadaha Reer Minnesota
Markaad macaamiishaada u dirto Cuntada Lugaha, waxaad dammaanad ka qaadaysaa inay heli doonaan cunnooyin diyaarsan oo caafimaad leh oo si toos ah loogu geeyo guryahooda oo ay weheliyaan baaritaanka caafimaadka iyo nabadgelyada ee mutadawiciin saaxiibtinimo leh. Diiwaangelinta macmiilkaaga cunnooyinka nafaqada leh ee dib loo eegay cunnooyinka guryaha la geeyo waa sahlan tahay waxayna macaamiishaada ka helaan cuntada nafaqada leh ee ay ugu baahan yihiin nolol caafimaad leh qiime aad u weyn. Eeg tusaalooyinka tusaalaha.
Cusboonaysiinta COVID-19: Shaqsi kasta oo jira 50 ama ka weyn oo wajaha dhibaato xagga helitaanka cuntada wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo ilaa 7 cunto asbuucii iyada oo aan wax kharash ah ku bixin. Hoos iska qor ama naga soo wac 612-623-3363.
Ku cusub sanadka 2021: Cunnadaada ka soo qaado khadka tooska ah iyo degel cusub! Degelkeenna cusub ayaa ka dhigaya diiwaangelinta macaamiishaada mid fudud! Adeegso nambarkooda si aad u bilawdo hawsha, kala dooro inta u dhexeysa cuntada maalinlaha ah ee kulul ama toddobaadlaha ah cuntada la qaboojiyey. Adeegso aaladda dalbashada qadka si aad u caawiso macmiilkaaga dooro cuntada ay rabaan! Ku bilow isticmaalka badhanka hoose!
Qaado Daraasaddeena oo looqoro inaad ku guuleysato kaarka hadiyadda $50!
Cunto kastaa waxay ka kooban tahay qaybo caafimaad leh oo ay ka mid yihiin entree, khudrad, rooti ama hadhuudh, miro ama macmacaan iyo cabitaan. Dhammaan cuntooyinka waxaa loo diyaariyey kuwo cusub oo aan lahayn wax ka-ilaaliyayaal ah waxaana lagu sameeyaa jikooyinka maxalliga ah. Eeg a muunad menu ama codso dhadhamin.